Gị DVD ọkpụkpọ na arụ orụ discs, a na ị maara n'ihi na n'aka, ma mgbe ị na-eche ihe ọ pụrụ n'ezie ime? Ya bụ, ihe dị iche iche nke formats o nwere ike ịrụ? Ka na-anya na ihe onye ọ bụla nke dị iche iche formats n'ezie bụ, na otú ị pụrụ hụ na gị na ọkpụkpọ ga-enwe ike kpọọ ya.
Ọtụtụ ọkọlọtọ DVD bụ MPEG-2 format discs. Home DVD Player ga-ọtụtụ ndị na-egwu AC-3 ma ọ bụ PCM audio discs. MPEG-2 na-akpọ H.222 ma ọ bụ H.262. Ndị a bụ mkpakọ ụdị na-ekwe ka n'ihi na nnọọ ọcha video na ọdịyo mmeputakwa na playback. Ekele ya nkịtị nkesa, ị ga-ahụ nke a format na-eji nnọọ ọtụtụ ebe gburugburu ụwa.
Iji jide n'aka na gị DVD ga-akpọ, eme ka n'aka gị DVD ọkụ omume nwere otu nhọrọ ike DVD na ike na na na n'ụlọ ígwè ọrụ. Ọ bụ a usoro a na-akpọ DVD authoring, na ọ na-enyere hụ na DVD ga-egwu n'ụzọ ziri ezi. Nke a na eme ekele na software eke video ihe faịlụ na nke ọ bụla DVD ọkpụkpọ ga na-agụ dị ka menu, nyere n'iwu, na video / ọdịyo faịlụ na ị na-ahụ na ihuenyo. (Ma ọ bụ ịnụ, na ikpe nke ọdịyo.) Nke a na-akpọ ndekọ Ọdịdị.
Video CD, ma ọ bụ VCDs bụ MPEG-1 mkpakọ, a ala video mma karịa ihe MPEG-2. Ụfọdụ DVD Player ga-enwe ike na-egwu ndị a, ụfọdụ ndị ga ọbụna ịbụ ike igwu egwu DVD data discs. Ọ bụrụ na ị-enwe ohere na-esure ha ka ha SVCD, ime otú ahụ, n'ihi na ọ ga-eme elu mma oyiyi na gị diski.
N'ofè isi formats, e nwere otu njuaka DVD Player na pụrụ ịkwado MOV, WMV, na WMA discs. The ụdịdị online maka ọkpụkpọ ma ọ bụ igbe kwesịrị ịgwa gị ma ọ bụrụ na ọ nwere ike na-akwado nke ọ bụla n'ime ihe ndị a.
DivX bụ ihe ọzọ na format kpamkpam, ọ na-abịa na abụọ iche-iche. E nwere ochie DivX wee si ke ufọt ufọt 1990s na Circuit City echekwa dị ka onye ọzọ mgbazinye DVD. Mgbe ahụ e nwere ọhụrụ DivX na bụ ụdị video usoro. The abụọ na-adịghị metụtara, n'agbanyeghị na ha nwere otu aha. New DivX-enye gị ohere nwere elu àgwà vidiyo na a nta file size obere ụlọ na draịvụ ike gị.
Newer Player na-aghọta DivX format faịlụ pụrụ ime otú otú ahụ ogologo oge ka ha nwere AVI itinye na koodu na ha. Ndị a egwuregwu nwere ike na-agụ a wider dịgasị iche iche nke formats, gụnyere data DVD na data CD. Ọtụtụ ebudatara fim na-abịa DivX format, ma ọ bụrụ na ị na-a ọkpụkpọ na nwere ike igwu ndị a discs, ị nwere ike ọkụ gị nkiri faịlụ na kọmputa gị na-kọmpat diski na-egwu ha na gị na n'ụlọ ntụrụndụ center. The mkpakọ dị otú ahụ na ha ga-dabara na a CD, nke ka dị ọnụ ala karịa a ide DVD.
Newer DVD na H.264 ma ọ bụ MPEG-4 ọkọlọtọ, ihe a maara dị ka Blu-Ray. Nke a bụkwa usoro ji iTunes n'ihi na ha fim, na ya nwere ike ịchọta na YouTube maka elu àgwà videos. Ọtụtụ HD mgbasaozi site USB na satellite ụlọ ọrụ ndị na MPEG-4 dị ka mma. Blu-Ray Player nwere ike igwu DVD, ọ bụghị ndị ọzọ ụzọ gburugburu. Nke a video mkpakọ format bụ ike nke na-etinye nnukwu ichekwa data na pụrụ iche discs kpọmkwem otu anụ ahụ hà ka mgbe DVD.
Ị nwekwara ike ịhụ MKV dị ka a format - nke a bụkwa Blu-Ray, ma ọ bụ ụdị ị ga-on a n'ụlọ ọkụ DVD, ọ bụghị a commercially emepụta otu. MPV bụ a eluigwe na ala format na bụ ike nke na-ejizi nnukwu ichekwa data. Ọ bụ onye na-emeghe ọkọlọtọ free akpa format, n'ihi ya, bụ ihe ngwa ngwa na-eme mgbanwe ka ihe dị gị mkpa ka o mee.
Ị nwere ike ụfọdụ n'ụlọ kere DVD ndị na-na AVI usoro. Dabere na gị n'ụlọ DVD ọkpụkpọ, o nwere ike ma ọ bụ ghara ịmata diski. Ọtụtụ n'ime ha agaghị ma ọ bụrụ na a na-paired na DivX.
Ọ bụrụ na ndị faịlụ na ị nwere na kọmputa gị na-adịghị ugbua na MPEG-2, ị nwere ike na-agba ọsọ ha site a akakabarede omume na-etinye ha n'ime na usoro. Ọtụtụ DVD authoring omume ga-eme nke a n'ihi na ị na-akpaghị aka. Ozugbo ị Ibu Ibu faịlụ n'ime usoro ihe omume, ọ ga-elele ya maka ndakọrịta, mgbe ahụ, na-enye iji tọghata ya n'ihi gị. Nke a nwere ike na-oge ụfọdụ, na-adabere size nke faịlụ. Ozugbo ọ mere, ọ pụrụ aga site na ike nke diski e kere eke usoro, ebe i nwere ike itinye ihe ọ bụla atụmatụ dị ka menus ma ọ bụ ikwu n'ụzọ tupu ịmalite na-ere ọkụ onwe ya.
Ụfọdụ n'ụlọ DVD Player ga-akpọ rewritable discs, ma nke a bụ obere. DVD + R ma ọ bụ DVD-R discs bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ yiri ka a ga ghọtara, na nke abụọ, DVD + R bụ onye na-fọrọ nke nta ka ala matara ha, ọbụna site kasị ọnụ nke DVD egwuregwu. Higher ọgwụgwụ DVD Player ga-enwe ike iji aka WMA na MPEG-4 video discs, na JPEG foto discs. Ugbu a, gị fim Windows Media na iTunes nwere ike igwu azụ n'ụlọ gị gị na igwe. Nero eji MP4 a otutu maka ha mkpakọ ọkọlọtọ, ma ọ bụghị dị ka eluigwe na ala.
Audio discs na-ghọtara site fọrọ nke nta niile DVD Player, karịsịa ma ọ bụrụ na ha bụ ndị .mp3 ma ọ bụ CD audio, na-akpọ CDA, discs.
Ya mere, olee otú i si mara na ọ bụrụ na DVD ọkpụkpọ na ị nwere pụrụ ịkwado ọ bụla nke dị n'elu ụdị nke formats? Ọtụtụ n'ime ha ga-enwe logos na ma igbe ma ọ bụ ihu nke ọkpụkpọ, ma ọ bụ ikekwe ma, na ga-egosi ihe ha na-akpọ. Okenye ụdị ga-egosi nnọọ DVD na CD, ma ndị ọhụrụ ga-enwe ọtụtụ ihe nhọrọ. Newer DVD egwuregwu na-emekarịkwa abịa na a elu definition upconversion atụmatụ dị ka mma. Nke a nwere ike na-a mgbe definition diski na-eme ka ọ na anya oké on a elu definition TV.
Na ụwa nke kọmputa, na acronyms ịchị kasị elu. Na Ọtụtụ nke faịlụ formats si n'ebe, ụfọdụ nke na-ọzọ mfe ghọtara na-eji karịa ndị ọzọ, ọ pụrụ ịdị mgbagwoju anya. Ịchọta nri DVD software maka kọmputa gị na ikike DVD ọkpụkpọ maka ụlọ gị enyemaka na-omimi nke usoro site n'otu formats na-eme ihe ma dị mfe na ndị ọzọ dakọtara.
Top Iri Best DVD Player Mmemme maka PC
> Resource> DVD> Olee Ụdị Formats Ọ a DVD Player Nkwado?